प्रेमिल मनले लेखेका वियोगान्त गीतहरु – मायाको फूल | साहित्य संसार
पाठकले जे भने पनि मलाई स्वीकार्य छ - समाश्री	भेटवार्ता - भगवती बस्नेत	नोष्टाल्जिया एक मिठो प्रेम र अनुभूति हो - लारा [LARA]	दर्शन र चिन्तनको गोठालो हुनुपर्छ आजका पाठक - समदर्शी काँइलासँग कुराकानी	फेसबुकको हल्लाखल्ला भर्चुअल मात्र हो - केदार संकेतसंग कुराकानी	साहित्य संसार लेखक सूची: प्रेमिल मनले लेखेका वियोगान्त गीतहरु – मायाको फूल ★ समा श्री★ प्रकाशित मिति: आइतबार, पुस १०, २०७३
लेखक : समा श्री विधा/श्रेणी : समीक्षा / समालोचना रचना संख्या : 12 प्रकाशन मिति : आइतबार, पुस १०, २०७३ समाश्री युवा पुस्ताकी प्रखर कवी हुन् । उनको वंशलोचन नामक काव्यकृति प्रकाशित भएको छ । काठमान्डौमा जन्मनु भएकी समाश्री हाल इजरायलमा कार्यरत हुनुहुन्छ । समा श्रीका अरु रचनाहरु मानिस प्रकृतिवत जन्मिन्छ, हुर्कन्छ, रमाउँछ र प्रकृतिबाट नै ज्ञान प्राप्त गर्दछ अन्ततः आफ्नो जीवन बिसर्जन पनि गर्छ । यो एउटा प्राकृतिक नियम हो, त्यस्तै गीत सङ्गित पनि मानिसको लागि बाँच्ने आधार हो, किनभने मानिसमा संवेदना हुन्छ र मानिसले भाषा पनि पाएको छ । आफ्नो मनको संवेदना, चाहे त्यो दुःखको होस् वा सुखको होस्, मानिस प्रकट गर्न चाहन्छ र यसैको लागि सङ्गीतको क समेत नजानेको मानिस पनि गुन्गुनाउँछ । मानिसले स्वभावतः अरूको पिर व्यथा, खुसी जस्ता संवेदना ग्रहण गर्नसक्छ र आफ्नो प्रकट पनि गर्न सक्छ । त्यसैले सुखमा होस् या दुःखमा आफ्नो मनको संवेदनालाई मानिस गीतको रूपमा प्रकट गर्दछ । यति मात्र नभएर हाम्रा चाडवाड र विभिन्न संस्कारगत कार्यमा समेत गीत सङ्गीतलाई स्थान दिइँदै आएको छ । भनिन्छ नि Music have no languages वास्तवमा सङ्गीतको भाषा हुँदैन, त्यसैले खोलाको कलकल होस् या चराको चिरबिर, झरीको टपटप आवाज होस् या झरनाको छंग छंग, मानिसले सबैमा सङ्गीत भएको अनुभूत गर्दछ । हामी कुनै न कुनै ध्वनिबाट तरंगित भएर आफ्नो बोली प्रस्फुटित गर्दछौ, त्यसैले सङ्गीत जीवनको अमूल्य अङ्ग हो, जिउने आधार हो भन्न सकिन्छ ।
यस एलबमका सबै गीतहरू संवेदनात्मक छन्, एक आम व्यक्तिको मनका बहहरू पोखिएका छन् र गीत श्रवण गर्दा यसले मनमा हुटहुटी उठाउन सक्षम छन् ।
प्रकृति नै सबैको महागुरु हो र गीतकार कुमार पौडेल स्याङ्गजामा जन्मनु भएता पनि उहाँ पोखराको प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको सुन्दर ठाउँमा हुर्कनु भयो । पोखरा आफैमा सुन्दरताको प्रतीक । यहाँको वातावरणमा मनमोहक सङ्गीतको झन्कार छ हावामा तरंगित छन् मायाका कुराहरू । सायद यही प्राकृतिक कारणले होला गीतकार पौडेलको यस गीति एल्बम “मायाको फूल “मा प्रकृतिको सौन्दर्यको वर्णनका साथै जीवनका विभिन्न आयामहरू जस्तो माया पिरतीको कथा, व्यथा र परदेशिनु पर्दा मायालुसँगको बिछोडको पीडा आदिलाई राम्रोसँग न्याय गरेर प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
भनिन्छ आमाको ममता र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि महिमामयी हुन्छन् । यसैले प्रवासमा बस्दा अनुभूत गरिएका आफ्नो जन्मभूमि प्रतिको अगाध माया प्रसस्तै पाइन्छ यस “मायाको फूल” गीति एल्बममा । उहाँलाई यो कृतिको सफलताको शुभकामना तथा बधाई । आगामी दिनहरूमा निरन्तरता कायम गर्दै गीत सङ्गीतमा इतिहास बनाउन सफल हुनुहोस भन्ने शुभकामना ।
यो कृतिलाई एउटा परदेशको बसाइमा घरको सम्झना अनि प्रेमिल मनको वियोगान्त कथाका शब्दहरूको संगालो नै हो भन्नु पर्छ । गायक सिडि विजय अधिकारीको एकल स्वर सङ्गीत र मनिषा राईको आवाजमा निस्केको एल्बम “मायाको फूल “का सबै गीतहरू मैले सुन्ने सुअवसर पाएँ र यसको सङ्गीत संयोजन देखि आवाज पनि निक्कै राम्रो लाग्यो । देशको माया देशभन्दा टाढा परदेशमा बस्दा धेरै लाग्छ । गीतकार पनि धेरै समयदेखि वैदेशिक रोजगारीको लागि परदेशमा हुनहुन्छ त्यसैले पनि मुटु नै चिसो हुने गरी आफ्नो भावनालाई गीतको माध्यम बनाएर पोख्नुभएको छ ।
धेरै भयो घर छाडेको बिरानो भो आफ्नै बाटो
आँखाभरि झल्को उनको सम्झनामा देशको माटो
कस्तो भए होलाआफू खाइखेली हुर्केको ठाउँ ?
के गर्दै छन् साथीसंगी उस्तैछ’कि फेरियो गाउँ ?
मिठो स्वाद आउँछ याद खाएको त्यो ढिडो आटो
परदेशमा गयो उमेर ढल्क्यो रूप रङ्ग बैँस
पसिना र आशु बिक्यो भन्दाभन्दै यही पैसा
सकिएन साहुको ऋण पुरियन घाउको खाटो
यस गीतमा गीतकार पौडेलले आफ्नो मात्र नभएर आफ्नो मनमुटु आफ्नै माटोमा छोडेर आएकाहरूको प्रतिनिधत्व गर्दै निक्कै मार्मिक ढङ्गले आफ्नो भावना व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रेम दुई आत्माको मिलन हो अन्तस्करणको ज्योति हो, सृष्टिको प्रथम मुहान पनि हो । प्रेम बिना संसारको अस्तित्व रहदैन । जुन सुकै अवस्थाका मानिसलाई पनि प्रेमको आवश्यकता हुन्छ । एक आपसको प्रेमकै कारण जीवन अस्तित्वमा रहेको हुन्छ । आफ्नो प्रिय बस्तु या व्यक्तिबाट टाढा रहन अथवा बिछोडिनु पर्दाको पीडा कस्तो हुन्छ ? कसरी बेलाबेला छाती गह्रौँ हुन्छ बेचैनको अनुभूति हुन्छ अतीतको सम्झनाले सताउन थाल्छ र सायद त्यति बेला यस्ता भावना गीतको माध्यम बनेर प्रस्फुटित हुन थाल्छन । आत्मिक प्रेमको अभावमा मन भित्र विरह र वेदना अग्नी बनी सल्कन्छन । एक्काइसौं शताब्दीमा मानिसका असिमित चाहना र कामनाका कारण आफ्ना प्रियजनबाट निक्कै टाढिन बाध्य भएका छौँ । पति पत्नीको पनि दीर्घकालीन बिछोड भएको अवस्था छ । सायद यस गीतको भावले पनि यही व्यक्त गर्न खोजेको हुनु पर्दछ ..
डाँडा काटि गयौ प्यारा पराई देशमा धन कमाउन
सँगै जिउने साथ बिना सक्दिन म रमाउन ।।
तिम्रै बाटो हेर्दा हेर्दै थाकिसके आँखाहरू
शून्य लाग्छ आफ्नै आँगन गुराँस फुल्ने पाखाहरू
मनमा तिम्रै नामराखी बालेकी छु दियो मैले
दिन रात छटपटी छ भन फर्की आउछौ कहिले ।
फेरिएन घरको छानो जोडियन केही पैसा
कल्कलाउदो उमेर गयो ढल्की सक्यो रूप बैँस
हुर्केबढे छोराछोरी तिम्रै आउने बाटो हेर्छन
बुढाभए बाबुआमा साहुँले सधैँ घरमा घेर्छन ।
डाडाकाटि गयौ प्यारा पराईदेशमा धन कमाउन
त्यस्तै अर्को गीत
मायाको फूल फुलाउछु भन्दै प्रीतिको बिरुवा सार्नेहरू
ख्याल गर घाउलाग्ला मुटुमा चोटखादा जीवन हार्नेहरू
ओठमा खुसी सजाउछु भन्दै मनमा प्रेम पाल्नेहरू
कहिलेकाही माया विष बन्छ मायामा भरोसा गर्नेहरू
कहिले साथ नछुटोस भन्दै मन्दिरमा भाकल गर्नेहरू
टुटेर जान्छ बाचा र कसम मन्दिरमा विश्वास गर्नेहरू
प्रेममा सजग हुन आह्वान गर्नुभएको हो कि झैँ लाग्ने यस गीत पनि मलाई निक्कै नै राम्रो लागेको छ ।
समष्टिमा यस एलबमका सबै गीतहरू संवेदनात्मक छन्, एक आम व्यक्तिको मनका बहहरू पोखिएका छन् र गीत श्रवण गर्दा यसले मनमा हुटहुटी उठाउन सक्षम छन् । शब्दमा भरिएका सङ्गित कर्णप्रिय छन्, सरल छन् भने स्वरले पनि शब्द र सङ्गीतलाई पूर्ण न्याय गरेको मैले पाएको छु ।
अन्त्यमा एक पटक फेरि गीतकार, सङ्गीतकार र गायक सबैको सफलताको कामना गर्दै यो एल्बमले हरेक नेपालीको हृदयमा बास पाओस् र सबैको मनमा मायाको फूल फुलाउन सफल होस भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
सम्बन्धित थप सामाग्रीहरु : रामलाल जोशीको ऐनाः सुदूरको आवाज इन्द्रमायाको देशमा एकछिन टहलिंदा त्यो मर्दको माया कविताराम श्रेष्ठका दुई कृति एक पर्यावलाेकन ‘गणतन्त्र र गौंथलीको बाऊ’ बारे केही टीका केही टिप्पणी नेपाली प्रगतिवादी उपन्यासको परम्परामा नौलो प्रस्तुति : हड्तालै–हड्ताल, जुलुसै–जुलुस एउटा मर्मस्पर्शी कथाः यहाँ किन आएको ? कृष्णपक्षको शुक्ल संकेत नेपाली साहित्यको सानो संसारसाहित्यिक अनलाइन पत्रिकाईमेल : info@sahityasansar.com